Hopewell Chin'ono Archives | 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
The government has accused the international community of interfering in the Hopewell Chin’ono case and tampering with the judicial system in order to influence the verdict. Chin’ono, a towering figure and a gentle giant according to his…
Harare High Court has set Thursday as the day to hand over bail ruling for incarcerated Transform Zimbabwe leader Jacib Ngarivhume who has been locked for allegations of inciting public violence...
Shorai Murwira Aug 14, 2020
The MDCA youth league says living conditions under the President Emmerson Mnangagwa led government are beyond inhabitable as they are not fit for humans. Zimbabwe has been going through a raft of socio-economic and political challenges…
Lovejoy Mutongwiza Aug 10, 2020
President Emmerson Mnangagwa Monday called for peace in the country after weeks of high political and social tensions which has seen the government coming in hard on its critics and opposition leaders. More than two dozen people have…
Elia Ntali Aug 4, 2020
Former Zanu PF national youth political commissar Godfrey Tsenengamu has claimed that the July 31 protest achieved its goals despite claims that it flopped. The firebrand ex Zanu PF member said the demonstration had achieved its targets…